Body of 100 Year Old Buddhist Monk is not ruined – Myanmar Photo News
Body of 100 Year Old Buddhist Monk is not ruined
February 9, 2018 February 9, 2018 myanmarphnews General, Local, News, Religion, Video
သက်တော် ၁၀၀ နှစ်ရှိ ဖျောက်ဆိပ်တောရကျောင်းဆရာတော် ဘဒန္တဦးဝိစာရ ပျံလွန်တော်မူပြီး ၁၁ ရက်ကျော်ကြာချိန်အထိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုတ်သိုးသွားခြင်းမရှိဟု သိရ (ရုပ်သံ)
တံတားဦး မြို့နယ် သပြေကန်ကျေးရွာ ရှိ ဖျောက်ဆိပ်တောရကျောင်းဆရာတော် ဘဒန္တဦးဝိစာရ သက်တော် ၁၀၀ နစ်ဟာ ပျံလွန်တော်မူပြီး ရက်ပေါင်း ၁၁ ရက်ကျော်ကြာချိန်အထိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မပုတ်မသိုး အနံသက်မရှိ ပဲ ပကတိအတိုင်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Body of 100 Year Old Buddhist Monk is not ruined even though he was passed away more than 11 days
Head monk of Arora Lake village monastery in Tada Oo region passed away for 11 days. His body is still soft like
living human even though he was passed away for 11 days now.
သက်တော် ၁၀၀ နှစ်ရှိ ဖျောက်ဆိပ်တောရကျောင်းဆရာတော် ဘဒန္တဦးဝိစာရ ပျံလွန်တော်မူပြီး ၁၁ ရက်ကျော်ကြာချိန်အထိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုတ်သိုးသွားခြင်းမရှိဟု သိရ (ရုပ်သံ)တံတားဦး မြို့နယ် သပြေကန်ကျေးရွာ ရှိ ဖျောက်ဆိပ်တောရကျောင်းဆရာတော် ဘဒန္တဦးဝိစာရ သက်တော် ၁၀၀ နစ်ဟာ ပျံလွန်တော်မူပြီး ရက်ပေါင်း ၁၁ ရက်ကျော်ကြာချိန်အထိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မပုတ်မသိုး အနံသက်မရှိ ပဲ ပကတိအတိုင်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Eleven Broadcasting on Thursday, February 8, 2018